AASraw Nootropics mpamatsy varotra - AASraw vovoka
/ Products / Nootropics vovoka
We are noodopia powder powder suppliers, Nootropics powder powder for sale, As we promised, all of our Powder Powder Powder is with pure no less than 98%.
Ny vovo-dronono nootropika, fantatra ihany koa amin'ny fanafody entin-tsaina sy ny fampihetseham-pandrefesana, dia zava-mahadomelina, fanafody, ary zavatra hafa izay manatsara ny asan'ny kognita, indrindra ny andraikitr'izy ireo, fahatsiarovana, ny famoronana, na ny antony manosika, amin'ny olona salama.
Ny fampiasana zava-mahadomelina matihanina amin'ny olona salama amin'ny tsy fisian'ny fitsaboana dia iray amin'ireo lohahevitra tena ifanakalozan-kevitra eo amin'ny mpikaroka momba ny neuroscience, psychiatrists ary dokotera izay mifototra amin'ny olana maro, anisan'izany ny fitsipika momba ny fitsipi-pifehezana sy ny rariny, ny vokatra, ary ny fanodikodinam-panafody amin'ny fanafody tsy ampiasana fanafody, ankoatra ny hafa. Na dia izany aza, ny fivarotana iraisam-pirenena momba ny famatsiam-bahaolana an-tserasera dia nihoatra ny US $ 1 miliara tamin'ny 2015 ary mbola mitombo haingana ny fangatahana maneran-tany an'ireny venty ireny.
Ny vovo-dronono nootropika - indraindray antsoina hoe fanafody mandaitra - dia fitambarana izay mampivelatra ny fiasan'ny atidoha. Lasa fomba fijery malaza izy ireo mba hanomezana soso-kevitra fanampiny. Araka ny tatitra Telegraph iray, hatramin'ny 25% ny mpianatra ao amin'ny anjerimanontolon'i Grande-Bretagne dia naka ny modafinil amin'ny fomba mahazatra ordinatera, ary ny mpiasan'ny teknolojia any California dia manandrana ny zava-drehetra avy any Adderall mankany LSD mba hanosehana ny atidohany ho fitaovana ambony kokoa.
Nahazo tombontsoa tamin'ny fantsom-pihariana Nootropics aho nanomboka tamin'ny 1997, fony aho niady tamin'ny fampisehoana kognita ary nandidy ny $ 1000 mendrika zava-mahadomelina avy any Eoropa (hany toerana ahafahanao mahazo azy ireo amin'izany fotoana izany). Tsaroako ny nanokafana ny fonosana tsy notakina ary nanontany tena raha hampitombo ny atidohako ny fanafody sy ny zavatra voajanahary.
Nanao izany izy ireo, ary mpankafy mpihetseham-po marobe aho hatramin'izay.
Manahy ny hafa kosa aho. Ny olana amin'ny fampiasana fehezam-boninkazo toy ny hoe "vovo-dronono nootropika" dia ny fanangonanao ny karazam-borona rehetra miaraka. Raha ny teknika manokana, azonao atao ny miady hevitra fa ny kafeinina sy ny kôkainina dia samy vovoka poofa nootropika, saingy tsy mitovy mihitsy izy ireo. Amin'ny fomba maro hanatsarana ny asan'ny atidoha, maro amin'izy ireo no manana risika manan-danja, tena sarobidy indrindra ny mijery ny vovobony nootropika amin'ny voka-bary.
1) Modafinil no be mpampiasa indrindra sy be mpampiasa indrindra manodidina ny poety Nootropics manodidina. Ary noho ny antony tsara: miteraka toe-javatra manana fahaiza-manao mahazatra izy, manintona ny fifantohana, ny fahatsapana ary ny fifantohana. Noho izany, ampiasaina amin'ny astronauts ao amin'ny International Space Station, atleta manerantany, sy pilotan'ny mpanamory fiaramanidina amerikana.
2) Phenylpiracetam dia famolavolana version of Piracetam, ny orinasa Nootropics tany am-boalohany. Miaraka amin'ny fanampin'ny vondrona Phenyl, Phenylpiracetam dia 10 mafimafy kokoa, ary mitarika haingana kokoa. Izany dia mamela na dia kely fotsiny aza ny manome tanjaka mahery vaika sy mahazatra haharitra ny fahatsiarovan-tena sy ny vokatra.
3) Manatsara ny fahatsiarovana ny Armodafinil. Armodafinil dia analogy amin'ny Modafinil. Manatsara ny fahatsiarovana fahatsiarovam-pitiavana izy io ary mampiroborobo ny faharetan'ny marary amin'ny torimaso matevina avy amin'ny aretin-tadiny sy ny fihenan'ny asa.
4) Manatsara ny fahatsiarovana ny piracetam. Ny piracetam dia nanatsara ny fitadiavana fahatsiarovan-dahatsary lava / fohy nandritra ny 60 ankizilahy kely.
Ny piracetam dia nampiseho fanatsarana manan-danja tamin'ny fahatsiarovan-tena am-bava sy tsy fahita firy nandritra ny fotoana fohy sy ny fiheverana ny marary mandalo amin'ny fandidiana.
Ny fitsaboana mitaiza (250 mg / kg) dia nanatsara ny fahatsiarovan-tenan'ny mpiasa ary nitombo ny fitehirizana ny fahatsiarovan-tena (+ citicoline) amin'ny totozy amin'ny amnesia.
5) Manatsara ny fahatsiarovana ny Oxiracetam. Ao amin'ny marary alemaina Alzheimer na mararin'ny aretina, ny 800 mg oxiracetam isan'andro dia manatsara tsaratsara isan'andro, tsy misy marika fandeferana. Na izany aza, ny fanandramana sain-dresaka sasantsasany dia ratsy kokoa noho ny antonony taorian'ny fitsangatsanganana farany teo.
Ao amin'ny olombelona, ​​ny oxiracetam dia mampiseho ny fanatsarana bebe kokoa amin'ny fitadidian-tsakafo raha oharina amin'ny piracetam. Amin'ny rat sy ny totozy, ny oxiracetam dia manatsara ny fahatsiarovana sy ny piracetam. Ankoatra izany, nanatsara ny fahaiza-mianatra izy io.
6) Manatsara ny fahatsiarovana ny Pramiracetam. Ny Pramiracetam dia mivarotra azy ho fitsaboana ny fahatsiarovan-tena sy ny tsy fahampian'ny fiheverana eo amin'ny olona efa zatra mihinan'ny aretina sy ny aretim-po. Ny Pramiracetam dia manana fiantraikany amin'ny fanatsarana ny fahatsiarovana ny marary tsy misy oksizenina ao amin'ny atidoha.
7) Manatsara ny fahatsiarovana ny Phenylpiracetam / Phenotropil. Ny mekanisma amin'ny phenylpiracetam / phenotropil dia tsy mazava tsara fa tokony hitovy amin'ny zava-mahadomelina hafa ao amin'ny fianakaviana racetam.
Mba hividianana vovon'aretina Smart Domaine, miezaha hahazoana antoka fa ny HPLC dia mitatitra miaraka amin'ny COA sy ireo antontan-taratasy hafa mba hahazoana antoka fa izy ireo no toetra sy toetra ambony.
Maneho 1-8 ny 13 vokatra
Sort by baovao
Sort ny lazany
Sort by eo ho eo Rating
Sort by Price: ambany ny ambony
Sort by Price: ambony ny ambany
Asehoy ny vokatra 8
Asehoy ny vokatra 16
Asehoy ny vokatra 24
Magnesium L-dônerôna vovoka
Phenylpiracetam (Carphedon) poids
β-Phenylethylamine HCL poids
Sunifiram (DM235) vovoka